53 အဘို့ရလဒ် dragon ball
နဂါးဘောလုံးကို z flash ကိုတိုက်ပွဲများ
ဒီဂိမ်းကို2ကစားသမားတွေလိုအပ်ပါတယ်။ တစျခုမှာ Goku, piccolo သို့မဟုတ် Gohan, အခြား Freeza, Vegeta သို့မဟုတ်ဆဲလ်ကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးခယျြဖို့အများကြီးနယ်ပယ်တွင်ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ၏ dragonball အဆုံး
အဆိုပါမြို့တပါးတိုက်ခိုက်စက်ရုပ်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Goku စက်ရုပ်ကိုဖကျြဆီးနှင့်စက်ရုပ်များ၏အားနည်းချက်များကိုသို့ရောင်စုံကိရိယာရိုက်ချက်သုံးပြီးခြင်းအားဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကနေမြို့ကယ်ဖို့လာရမညျ
2 တိုက်ပွဲဝင်နဂါးဘောလုံးကို goku
ဒီထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုရှင်သန်မှုအတွက် songoku သိဖို့ Tao ကအောင်ပွဲကကူညီပေးပါ
နဂါးဘောလုံးကို z goku dressup
Goku ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားဖိနပ်, ဆံပင်ပုံစံတွေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ရာတွင်ကိုကူညီပါပိုမိုလှပသောဓာတ်ပုံများအားသက်ရောက်မှုများပေါင်းထည့်ပေးပါ။
3.0 ဂိမ်းတိုက်ခိုက်နေနဂါးဘောလုံးကို z
3.0 ဂိမ်းတိုက်ခိုက်နေနဂါးဘောလုံးကို z ။ ပုလဲတိုက်ပွဲအထွေထွေညီလာခံ၏ကမ်ဘာ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာအတွက် 1.6 update ကိုပိုမိုရွေးချယ်နိုင်ဇာတ်ကောင်ပေါင်းထည့်သွားနှင့်ကမ္ဘာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာအတွက်ညီလာခံချန်ပီယံအနိုင်ရရှိခဲ့ပါက,
ဘောလုံးဂိမ်းကစားရန်ယခုလာ! စလုပ်ဖို့နဂါး Ballz သင်တို့၏မျက်နှာသာဇာတ်ကောင် Pick ။ သင်ကသင့်ကိုယ်သင်ပျော်မွေ့သို့မဟုတ်နှစ်ခု-player mode ကိုအောက်မှာသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကကစားနိုင်ပါတယ်။
goku2တက်ဝတ်စားဆင်ယင်
သငျသညျခငျြတလမ်းမှ dragonballz ဇာတ်ကောင်မှ Goku ကိုတက်ဝတ်စားဆင်ယင်။
နဂါးဘောလုံးကိုကံကောင်း card ကို
ဒီဂိမ်းထဲမှာရှိဆငျးသကျသူတို့၏မျက်နှာများနှင့်အတူနဂါး-ဘောလုံးကိုကတ်များ7စွမ်းဖြစ်, သင်၏အရာဝတ္ထုကို 50 စက္ကန့်အတွင်းအပေါငျးတို့သကိုက်ညီတဲ့စွမ်းရှာတွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပြီးကတ်များနှစ်ယောက်ကို Select လုပ်ပါ။ သူတို့အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း အကယ်. ထိုကတ်များကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ သူတို့တစ်တွေဆိုရငျ
ben 10 နဲ့ Naruto ကစားကမ်းခြေဘောလုံး
ကစားအားဖြင့်တရားရုံး၏အခြားဘက်မှာဒီဂိမ်းမြေပြင်ကိုထိမှ Naruto ဘောလုံးကိုရတဲ့ကူညီရန်ကြိုးစား
hobo7- ကောငျးကငျဘုံဂိမ်း
အဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် slob နှင့် Hobo သူဘုရားသခင်နှင့်အတူသူတို့၏အကောင့်အခြေချရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်သင်တို့သည်ဤစူပါမစ်ရှင်အတွက်သူ့ကိုကူညီရမယ်မာရျနတျချေမှုန်းပြီးနောက်နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ သူကပညာမတတ်အစဉ်အမြဲအတိုက်အခံနှင့်အတူအခြေချရန်သူတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသုံးပါတူညီတဲ့ shit လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
phineas နှင့် ferb caribe နွေရာသီ
ကမ်းခြေမှာ Phineas နှင့် Ferb အားလပ်ရက်။ Phineas, Ferb နှင့် Isabella ဘောလုံးကိုပစ်ချ play, Isabella Ferb Phineas မှဘောလုံးကိုဖမ်းခြင်းနှင့်ရှောက်သွားရန်ရှိသည်, မြေပေါ်တွင်ဘောလုံးကိုထိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Ferb ထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်ရွှေ့ဖို့ mouse ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Phineas မှဘောလုံးကိုလွန်။
အစွန်းရောက် Bikers သင်တစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲအဆင့်ဆင့်အပေါ်ကျွမ်းကျင်မှုကားမောင်းသင်တို့၏မော်တော်ဆိုင်ကယ်သက်သေပြဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးတော်မူ၏။ သငျသညျအတားအဆီး, သင်ကသူတို့ကိုမထိလျှင်သင့်ဆိုင်ကယ်ဖျက်ဆီးမည်သည့်အချို့သော spikes ရွေ့လျားတွေအများကြီးရှိသည်။ ဒီခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုအဘို့အဆင်သင့်ရှိပါ။